Chinese Gov should send 200 million Chinese Shans into Myanmar to madeareverse takeover | Dr Ko Ko Gyi's Blog
မဟာမြတ်မုနိ ဘုရားကြီးနင့်ရခိုင်ကမန် မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာတွေဖြစ်သည် »
Chinese Gov should send 200 million Chinese Shans into Myanmar to madeareverse takeover
Burma first President’s son wrote that in the 50’s when Chinese Premier Chew En Lai came to Burma…Chinese Premier told his father that there were more than 100 million Shan language speaking persons in China…I like your idea…Please invite all of them…may be 200 million (as one child policy was not practiced on them) as Tine Yin Thars in Myanmar…
In Business Corporate terms…they could do reverse take over the whole Myanmar….Who knows those Bengali Buddhists (may be Hindus pretending to be Buddhists) could also do reverse take over…And in referendum …may be vote to combine with East Indian States….
And I have read that there are MORE Kachins in China than in Myanmar. More Chins in India than in Myanmar. More Shans in Thailand than in Myanmar. All our neighbours should send their citizens into Myanmar to claim some land here and to help their relative Ethnic Minorities free from colonist Bamas.
Shamin Mdy ခိုးဝင်လာသော
Ah Tuu ”နိုင်ငံခြားသို့ တရားမဝင်ခိုးထွက်ခြင်း” ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာကိုခေါ်သလဲမသိ။
Htike Aung Tun တိုင်းရင်းသားများဆိုတာ ဘယ်တိုင်းရင်းသားပါလိမ့်???
Maung Maung Ko တ ရုပ် ပြည် မှ မိ မိ တို့ ၏ က ချင် တိုင်း ရင်း သား ၂ သန်း ခန့် လာ မည် ဆို ပါ က အ စဉ် ပြေ ပါ မည် လား ခင် ဗျား…
အကျာ ဘို ကြီး ဟာ မြန်မာတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထဲ ခိုးဝင်နေပြီ အနောက်တံခါးပြုတ် တံတားလုပ်ထားတာ အခုမှ သိတော့တယ်။
Ah Tuu ပထွေးနဲ့မတည့်တော့မှ အဖေရင်းဆီကို ပြန်လာသလိုပဲ။
Hart King ခိုးဝင် တိုင်းရင်သား
Roland Nyi Nyi ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ရခိုင်များ။
Moe Annawar ရခိုင်မျိုး အမျိုးကိုဝင် တိုင်းရင်းသား?? ၁၉၈၂ ??
Ah Tuu ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ပြန်ဝင်လာသူ တိုင်းရင်းသားတွေကိုရော အိမ်ဆောက်ပေးမှာလား။
Kyaw San တရုပ်ပြည်ထဲမှာတိုင်းရင်းသား၂ သန်းလောက်ရှိတယ်။
U Tin Aung ဘင်္ဂလားဒေရှ် မှာဒီလောက်ဒုက္ခရောက်နေတာ
တိုင်းရင်းရခိုင်မွစ္စလင်မ်တွေ ရိုဟင်ဂျာတွေကြ တော့ခိုးဝင်ဘင်္ဂါလီတဲ့ ဟား ဟား ။
Naing Naing Nyunt အရူးဥပဒေ
This entry was posted on October 19, 2014 at 5:59 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.